Enwere m ike ịhụ n'elu ọchụchọ ọchụchọ Amazon dị elu iji jiri ngwá ọrụ dị mfe?
Ọ dịghị mkpa ịsị na ụwa nke nyocha ọchụchọ n'ịntanetị na-agbanwegharị karịsịa na nchọpụta isiokwu na nhọpụta ha kwesịrị ekwesị. Nagbanyeghi ebe o choro ijiri usoro ozo - o nwere ike ibu ma o bu ihe ntaneti n'igwe na-acho site na isi engines (dika Google n'onwe ya, Yahoo, Bing, wdg), ma obu karia ya ma obughi uzo ozo nke oma iji rigo elu ụlọ ahịa ahịa, dịka Amazon ma ọ bụ eBay. Nanị ọdịiche dị n'etiti ọchụchọ ọkọlọtọ n'ịntanetị na ọrụ ọ bụla ecommerce ma ọ bụ ahịa mbupu-azụ bụ na nchọpụta dị otú ahụ kwesiri ịghọkwu nsị-ezubere iche na ịsọ mpi. N'okpuru ebe a, m ga-egosi gị ụzọ abụọ dị mfe ịchọta n'elu Amazon nyochaa otu isiokwu. Ya mere, ka ị jiri nzere bara uru bara uru maka uru nke onwe gị, m na-atụ aro ka ị na-anwale usoro nkwado pụrụ iche (Inspector Inspector), ma ọ bụ ndụ dị ndụ na ọrụ gị maka n'efu, dị ka mgbe niile - microsoft reporting business intelligence.
Onye na-enyocha onye isi
Onye na-enyocha onye isi bụ nyocha ịntanetị pụrụ iche nke nwere ike inyere gị aka ịchọpụta n'elu ọchụchọ Amazon maka ihe ọ bụla ma ọ bụ ndepụta ndepụta. Nzuzo a bara uru ya na ihe omuma ya mara dika Search Trending Keyword. Ọ nwere ike ịme gị ka ị na-agba ọsọ ọsọ ngwa ngwa ma na-anọgide na-adị ọhụrụ na mkpụrụ okwu ọ bụla na nso nso a rigoro n'elu Amazon ọchụchọ. Kedu ihe ọzọ - Onye na-enyocha edemede isiokwu nwere nhọrọ abụọ ọzọ dị oke ọkụ (nke a maara dị ka Indexation Tester and Reverse ASIN), nke na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ndepụta ngwaahịa gị nke ọma iji nweta mgbasa ozi n'ịntanetị kachasị ukwuu n'ebe ahụ. Nanị ihe ọjọọ banyere isiokwu nyocha nke isiokwu a bụ na ọ dị mwute ikwu na ọ nweghị nsụgharị free. Naanị ikpe a na-ahapụ gị ka ị kpebie ma ị ga-aga maka ndebanye kwa ọnwa ma ọ bụ na ị ga-enweta ya n'enweghị ya.
Dịka m kwuwororịrị ná mmalite, nchọpụta isiokwu dị na ọnụ ọgụgụ nwere ọtụtụ ihe yiri nke a, n'ezie ileghara - ma ị na-achọpụta peeji nke maka ọchụchọ Google mbụ, ma ọ bụ na-arụ ọrụ na ndepụta ngwaahịa maka ecommerce ma ọ bụ ahịa mbupu. Echere m na n'ihi ihe ụfọdụ mere anyị ji bụrụ ezigbo agadi Isiokwu Planner site n'ịchọ nnukwu ibu ụwa na-efu ọtụtụ ihe, karịsịa site n'afọ ndị na-adịbeghị anya. N'etiti ọtụtụ ndị dị iche iche dị iche iche nke ikpo okwu nke ecommerce na ngwaọrụ ndị metụtara ya kpọmkwem maka mkpa ha na ihe mgbaru ọsọ ha, usoro mbụ nke Google (a.k.a. Google AdWords) ejiriwo ike ya zuru ezu. M na-ekwu na Isiokwu Planner bụ naanị otu ngwá ọrụ n'etiti ụdị dịgasị iche iche (na mgbe niile n'efu!), Nke gụnyere AdWords na ndabara. Ma ọ ka dị nnọọ uru ọ bụghị nanị dị ka naanị mgbasa ozi mgbasa ozi siri ike, mana ịchọta, dịka ọmụmaatụ, n'elu Amazon na-achọ isiokwu ndị dị mkpa na mkpịsị ugodi dị mkpa ogologo-tail.
Ka o sina dị, ka anyị chee ya ihu - ihe dị anyị gburugburu na agbanwe agbanwe mgbe niile. Ma, ọ pụtaghị na anyị niile ga-achọ naanị maka ngwá ọrụ ọhụrụ, ngwaọrụ ngwanrọ, ma ọ bụ na-adịbeghị anya edozi ngwọta. Ee, mgbe ụfọdụ, ha dị oke, mana n'onwe m, m ka kwere na Google Planner ka na-egwu egwu, ọ dịkarịa ala na nke ahụ abụghị ọrụ zuru ezu iji nọrọ na-adị na ọchụchọ kachasị elu n'elu ngwaahịa ọchụchọ Amazon.